Iindidi zeTerrarium: iTropri Terrarium | Ngeentlanzi
Xa sinezilwanyana zasekhaya, ezifana nofudo okanye isele, kubalulekile ukuba sizigcine ngaphakathi iteriyamu, Yeyona nto ikufutshane kwindawo abahlala kuyo, ukuze bakwazi ukukhula kunye nokukhula ngokugqibeleleyo nangokufanelekileyo.
Los iintlobo ezahlukeneyo zeeterrariums, Ziyahlulwa ngokobungakanani bazo, ubukhulu, umhombiso kunye nezinto ezisetyenzisiweyo. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ayinguye umnini wezilwanyana okhetha olu hlobo lweempawu, kodwa endaweni yoko, kuxhomekeke kwisilwanyana esinaso, kufuneka silungelelanise i-terrarium kuyo. Khumbula ukuba kukho iintlobo ezahlukeneyo zeeterrariums, kodwa zonke zinokuhlelwa ngokwamaqela ama-3 ahlukeneyo achaza uhlobo lwendalo eya kuthi inikwe isilwanyana.
Okokuqala, sine kwimimandla yetropiki, ezinomsebenzi wokulinganisa imeko-bume eyenzeka kwiitropiki, zibonakaliswa ngokuba nezinto ezigalela amanzi, ezinjengeengxangxasi, okanye amachibi amancinci, ukuze izilwanyana zidade kwaye zipholile kuzo, ngaxeshanye ukuvelisa ukufuma okwaneleyo ukulingisa imeko yetropiki. Gcina ukhumbula ukuba indibano yolu hlobo lwe-terrarium ibonelela ngobunzima obuncinci, kuba umhombiso kufuneka uhlale uqinile kwaye ukulungele.
Ezi ntlobo zemimandla mide kunokuba zibanzi, kuba zihlala zisetyenziselwa uhlobo lwearboreal arbor, ezinje ngeiguana eziluhlaza. Ngokwesiqhelo, ulwakhiwo lwayo lukwasebenza ukufumana iinkuni eziza kunceda ukuhombisa okusingqongileyo kunye nokuxhasa kunye nokunceda isilwanyana ukuba sinyuke kwaye sibe nendawo ethe chatha kwindawo enye efanayo.
Kubalulekile ukuba uyikhumbule into yokuba iqondo lobushushu nokufuma ngaphakathi kwindawo ekuhlala kuyo izilwanyana kufuneka zihlale ziphakame, ngaphezulu okanye ngaphantsi kwe-25 ukuya kuma-30 degrees celcius, ukuze isilwanyana sethu sizive ngathi sikuso Indawo yokuhlala yendalo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » abanye » Amphibians » Iindidi zeTerrarium: iTroparium yeTropiki
Intlanzi ebomvu ebomvu